Olee otú iji mee ka arụmọrụ SEO gị na Njikọ ndị dị n'ime - Ntuziaka Site na ihe mgbochi
Ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ dị, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ka e kere kwa ụbọchị. Ngwuregwun'ihi na ọnụnọ n'ịntanetị siri ike. Iji mee ka ndị na-asọ mpi gị belata, ị ga-ebuli saịtị gị site na SEO site na saịtị - superannuation australia finder. Otu n'imeihe kachasị mkpa dị na SEO site na saịtị bụ njikọ dị n'ime. Otú ọ dị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ná ndị mmadụ adịghị ege ya ntị. Njikọ dị n'ime saịtị na-emetụta otú ọchụchọengines chọpụta ma lee ọdịnaya gị na ahụmịhe ọrụ gị.
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara ,emeela usoro njikọ nke ụlọ ọrụ iji kwatuo ndị asọmpi gị.
Otu esi achọta ihe odide nke ederede
Ngwá ọrụ dị irè ị nwere ike iji kpokọta data ntanetị bụ Fream Frog. Ọnwere ma nsụgharị na akwụ ụgwọ. A na-emepụta nsụgharị free maka obere weebụsaịtị.
Mgbakwunye Ọdịdị Ọzọ
Mgbe a na-emegharị ahụ, anyị kwesịrị ịchọta URL nke anyị na-eme nchọpụta. Iji meengwa ngwa, banye na njedebe nke URL n'ime igbe ọchụchọ. Mgbe ịchọtara ya, pịa na URL ziri ezi na nza ka HTML. Ọzọ, pịa"na njikọ" na ala nke ibe. Ị ga-ahụ njikọ niile dị n'ime URL ahụ ị họọrọ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịbupụ njikọ nke ụlọ. Iji bubata ha, pịa pịa nrina URL wee họrọ "Mbupụ> Njikọ".
Hichaa Ndekọ Njikọ Njikọ
Mgbe ị wepụsịrị njikọ ndị dị na ya, nzọụkwụ ọzọ bụ iji dochie ndepụta ahụ. Ọ bụenwere ike ịnweta URL ndị duputara n'ihi akwụkwọ ụtụ akwụkwọ na nsụgharị sistemụ..Tinye URL n'ime Google Doc ma dozie ha n'usoro mkpụrụ akwụkwọ.Akpokọta URL ndị a ga-agbakọta ma ya mere, dị mfe iwepu.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịchọta ihe odide pụrụ iche iji wepụ URL. Ọ bụrụ na ị na-eji yaMac iji iwu + F. Maka Windows jiri akara + F iji wepu ha, ị ga-ahapụ aha nke njikọ njikọ na ihe odide ihe arịlịka ọzọ.
Nyochaa njikarịcha On-Site
Site na ndepụta nke njikọ nke ụlọ, ị ga-achọ ikpebi ihe ndị na-ahụ maka saịtịịchọrọ inyocha. Ndị a bụ njirisi iji mee ihe.
Ihe e ji mee ihe na URL ahụ, ihe edemede na mkpado aha.
Ogologo nke isiokwu.
Lelee ma ọ bụrụ njikọ ahụ dị na ibe mbụ.
Ọ bụrụ na njikọ ahụ dị na 100 mbụ nke okwu ahụ.
Ụbọchị e bipụtara isiokwu ahụ ma ọ bụrụ na emelitela ya.
Jiri Mpempe akwụkwọ Google iji nyochaa njikọ niile ma dekọọ nsonaazụ.
Otu esi eji ya dabere ma ebe nrụọrụ weebụ gị dị ọhụrụ ma ọ bụ na ọ dị.
Maka ebe nrụọrụ weebụ ohuru, họta ihuenyo elebara ma mee ya site na usoro a tụleren'elu. Ị ga-ahụ njikọ niile na otu esi eche ha.
Na-esote, mee njikọ nhazi njikọ iji ghọta ogo ọrụ dị maka isi peeji.Jiri isi akwukwọ iji kenye echiche di n'ime. Ịchọrọ akaụntụ SEMrush nke a na-akwụ ụgwọ ka ịmepụta ndepụta ndepụta. Site na ozi ị ga-enwetamepụta ndepụta ndepụta nke dabeere na ọdịnaya nke onye ọkaibe gị.
Ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a
Usoro dị iche ma ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ dị na ọdịnaya. Site naKeywords na-ekpebi nkwekọ isi nkuku gị. Na-esote, jiri SEMrush wee bubata kọntaktị niile ma lelee ma ọ bụrụ na e nwere peeji nke dịlarị ọkwa maka gịisiokwu. Melite ibe ma jiri ya.
Ọ dị mkpa ijide njikọ njikọ gị. A na-eji njikọ ejiengines ọchụchọ iji gosi peeji ndị ị chere dị mkpa nakwa ka ị nyere ndị ọbịa aka ịnyagharịa saịtị ahụ.